न घर छोडे, नत विदेशबाट फर्केका कसैलाई भेटे नै, तर पनि भए कोरोना संक्रमित – " सुलभ खबर "
छत्तीसगढः छत्तीसगढका स्वास्थ्यमन्त्री टिएस सिंहदेवले कोरोना भाइरसको तेश्रो चरणमा पुगेको र कम्युनिटी ट्रान्समिसन भएको आशंका व्यक्त गरेका छन् । राजधानी रायपुरमा बिहिबारका दिन ६८ वर्षीय व्यक्तिमा कोरोना संक्रमण देखिएपछि यो आशंका गरिएको हो ।
कोरोना संक्रमण देखिएका ती व्यक्तिले आफू लामो समयदेखि रायपुर भन्दा बाहिर यात्रा नगरेको र विदेशबाट फर्केका कुनै पनि व्यक्तिको सम्पर्कमा समेत नरहेको दावी गरेका छन् । टिएस सिंहदेवले बीबीसीलाई भने, “संसारमा जुन प्रकारले कोरोना भाइरसको सामुदायिक प्रसार भएको छ, त्यसबाट अहिलेसम्म जोगिएका थियौं । तर रायुपरको नयाँ संक्रमित व्यक्तिको रिपोर्टपछि मलाई यो कुराको आशंका छ कि यो
सामुदायिक प्रसारको घटना हुनसक्छ । चिकित्सक आज फेरी यो घटनाको जाँच गर्नेछन् ।”कोरोना भाइरसबाट संक्रमित ती व्यक्तिलाई रायपुरको एम्स अस्पतालमा भर्ना गरिएको छ । एम्सका डाइरेक्टर डा. किरण पिपरेका अनुसार, कोरोना भाइरसको संक्रमण छ भने कतै न कतै बिरामी कुनै संक्रमित व्यक्तिको सम्पर्कमा आएकै हुनुपर्छ । अन्यथा संक्रमित हुने कुनै कारण नै हुँदैन ।
तर संक्रमितका छोराले भने उसका बुवा सामान्यतः घरमा नै बस्ने गरेको बताए । गत महिना उनले पानीको कनेक्सनका लागि नगर निगममा एकदुईपटक गए पनि अरु कुनै यात्रा नगरेको उनले बताए । यसका साथै परिवारका कुनै पनि अन्य सदस्यले विदेश यात्रा नगरेको समेत उनको भनाई छ ।रायपुरका मुख्य चिक्तिसा तथा स्वास्थ्य अधिकार डाक्टर मीरा बघेलले बृद्ध व्यक्तिसँगै परिवारका अन्य सदस्य र घरमा भाडामा बस्ने अरुको पनि रगतको नमुना लिइएको बताइन् ।
आखिर ती व्यक्तिमा कसरी संक्रमण भयो भन्ने कुरा शोधको विषय भएको उनको भनाई छ । उनका दुईजना छोरा छन् । यसमा एकजना चिकित्सककहाँ ड्राइभर छ भने अर्कोले अटो चलाउने गर्दछन् । घरमा एक दर्जनबढी व्यक्ति बस्ने गर्दछन् । बघेलाले सबैको जाँच गरेपछि मात्रै कुनै अनुमानमा पुग्न सकिने बताइन ।
के हो कोरोनाको तेश्रो चरण ?
इण्डियन काउन्सिल अफ मेडिकल रिसर्चका अनुसार, कोरोना भाइरस फैलिने चारवटा चरण हुन्छन् । पहिलो चरणमा ती व्यक्तिहरु संक्रमित भएको पाइन्छ जुन अरु देशबाट भारत आएका छन् र उनीहरुमा पहिलादेखि नै कोरोना भाइरस थियो । यो चरण भारतले पार गरिसकेको छ । किनेभने यस्ता व्यक्तिहरुबाट भारतमा स्थानीय स्तरमा संक्रमण फैलिसकेको छ ।
दोश्रो चरणमा स्थानीयस्तरमा संक्रमण फैलिन्छ । तर यी ती व्यक्तिहरु हुन्छन् जो कुनै न कुनै विदेशबाट फर्केको संक्रमित व्यक्तिको सम्पर्कमा आएका हुन्छन् । कम्युनिटी ट्रान्समिसन तेश्रो चरण हो । यदि कुनै व्यक्ति संक्रमित व्यक्तिको सम्पर्कमा नआएर पनि या संक्रमित देशको यात्रा नगरीकन पनि यसको प्रभावमा आउँछ भने त्यो तेश्रो चरण मानिन्छ ।र, चौथो चरढामा संक्रमणले स्थानीयस्तरमा महामारीको रुप लिन्छ ।